01 / 09 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 445 Views စာ0မှတ်ချက် 41690 Friends ထွန်းပြက္ခဒိန်, 60603 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်, 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, 76390 ဟယ်ရီပေါ်တာထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Avengers, Black ကမုဆိုးမ, ကပ္ပတိန် Marvel, City, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego CIty, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel, Lego Star Wars, Marvel, နစ်ခ် Fury, Spider-Man, Star Wars, Thanos, Thor, တိုနီ Stark
နှစ်စဉ်အပိုင်းအခြား Lego Advent Calendars များကို ၀ င်ရောက်လာသောအားလပ်ရက်မတိုင်မီကြိုတင်မှာယူရန်ယခုရရှိနိုင်ပါသည် Marvel ၎င်း၏အမျိုးအစား။
၂၀၂၁ တွင်စျေး ၀ ယ်သူများစိတ်ကြိုက်ရွေးရန်ရွေးချယ်နိုင်သော Advent Calendars ငါးခုကိုရရှိနိုင်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ, Star Wars, CITY နှင့် Friends အပိုင်းအခြားကိုပြုလုပ်သည်။ သို့သော်အသစ်ရောက်လာသူတစ် ဦး သည်ဤရွေးချယ်မှုနှင့်အတူယခုနှစ်တွင်ပါ ၀ င်သည် 76196 Marvel Avengers Advent ပြက္ခဒိန်.
ပထမဆုံး Lego Marvel Advent Calendar သည်မော်ဒယ်များကို E ကိုအဓိကထားသည်artခရစ်စမတ် p နှင့်အတူ h ၏အင်အားအကြီးဆုံးသူရဲကောင်းများarty သည် Avengers Tower ၌ Tony Stark မှလွဲ၍ အခြားသူမဟုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဖွဲ့အများစုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီး Thanos တောင်မှသူ့ရဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ကိုပြသနေသည်။
ထိုစိတ်ကူးဖြင့်နေ့စဉ်တံခါးများတွင်သေးငယ်သောပုံစံအမျိုးမျိုးပါလာသည် တရားဝင်အစုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သည်မရ။ သူတို့ထဲကတစ် ဦး ရွေးချယ်ရေး မော်ဒယ်ဟောင်းများကိုပင်ချဲ့နိုင်သည် အပါအဝင် 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ.
စုစုပေါင်း minifigures ခုနစ်ခုပါ ၀ င်သည် 76196 Marvel Avengers Advent ပြက္ခဒိန်၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ရာသီအလိုက်အများဆုံးဖြစ်သည် Lego အစုံ။ အဲဒီ့အထဲမှာဗိုလ်ကြီးပါပါတယ် Marvel, Nick Fury, Thor, Black Widow, Thanos နှင့် Jacket ၀ တ်ဆင်ထားသော minifigures နှစ်ခုပါ ၀ င်သည် Spider-Man Iron Man သည်ဓာတ်ပေါင်းဖိုထည့်သွင်းထားသောခရစ်စမတ်ဆွယ်တာကိုဝတ်ဆင်သည်။
76196 Marvel Avengers Advent ပြက္ခဒိန် £ ၂၄.၉၉ / ၃၉.၉၉ / € ၂၉.၉၉ သို့ယခုထွက်ရှိသော်လည်းအားလပ်ရက်များကိုရေတွက်ရန်အခြားအခင်းအကျင်းကိုမျှော်လင့်သူများအတွက်အောက်ပါစာရင်းအပြည့်အစုံဖြင့်နောက်ထပ်လေးခုရနိုင်သည်။